पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारीमा देउवा, क–कसलाई रोजे देउवाले ?
काठमाडौं २९ं चैत । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, खड्का र विश्वकर्माको
आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता
काठमाडौं २९ं चैत । महालेखाले नेपाल आयल निगमले झापाको मेचीनगर, सर्लाहीको हरिपुर, चितवनको लोथर र रूपन्देहीको वसन्तपुरमा डिपो निर्माण गर्न खरिद गरेको जग्गामा प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र भर्ने व्यक्तिमार्फत स्वामित्व ग्रहण नगरी
काठमाडौं २९ं चैत । चियापानमा एक अर्ब विनियोजन, ५९६ प्रतिशत बढी खर्च महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६
काठमाडौं २९ं चैत । निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गरेपछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भएको छ । किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत
को हुन सुडान घोटालाकाण्डका दोषि ?
काठमाण्डौं २८ चैत । सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई
यस्तो बन्दै छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाण्डौं २८ चैत । विकासमा फड्को मार्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली विकास आयोजना प्राधिकरण गठन प्रस्तावसहित वाम गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेट निर्धारण गरेको छ। गठबन्धन
एमाले-माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’
काठमाण्डौं २८ चैत । एमाले-माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ। एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र सांगठनिक रुपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा दुवै पार्टी आ-आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि संवाद
काठमाण्डौं २८ चैत । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २ नम्बर प्रदेशमा पनि वामपन्थीकै सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । सातै प्रदेशमा वामपन्थीको स्थिर सरकार बनिरहेको अवस्थामा २ नम्बर प्रदेशमा
यो रमेश खरेलको बोली हो । बुझ्नुस् फाइनल डिसिजन हो । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकाका सुजित महतलाई खरेलले
बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउन तयार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ– निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता छ । अनियमितताका केही उदाहरण महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका
काठमाडौं २८ चैत । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार सा“झ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्रमा
काठमाडौं २८ चैत । जीवनका सुख दुःख सँगै काट्न वाचा गरी पिरती लाएको प्रेमीले प्रेमिकालाई नरकको जिन्दगीतर्फ धकेल्छ भन्ने कसले पो सोच्छ र ? घुम्न जाने बहानामा प्रेमीले सीमा कटाउँदै